အိန္ဒိယ - Safran လှည်း? ထွက်ခွာသွားသည့်စစ်တမ်းများအရမဟာရပ်ရှနှင့်ဟယ်ရာနာရှိ NDA မှကြီးမားသောအကျိုးအမြတ်များရရှိခဲ့သည် အိန္ဒိယသတင်း - Teles Relay
မူလစာမျက်နှာ » အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အိန္ဒိယ - Safran လှည်း? ထွက်ခွာသွားသည့်စစ်တမ်းများအရမဟာရပ်ရှနှင့်ဟယ်ရာနာရှိ NDA မှကြီးမားသောအကျိုးအမြတ်များရရှိခဲ့သည် အိန္ဒိယသတင်း
အိန္ဒိယ: Safran လှည်း? ထွက်ခွာသွားသည့်စစ်တမ်းများအရမဟာရပ်ရှနှင့်ဟယ်ရာနာရှိ NDA မှကြီးမားသောအကျိုးအမြတ်များရရှိခဲ့သည် အိန္ဒိယသတင်း
နယူးဒေလီ - BJP သည်အဓိကအင်အားကြီးနိုင်ငံများနှင့်ပြန်လည်အာဏာပြန်ရပုံရသည် မဟာရပ်ရှ et le Haryana ပြည်နယ်၏အမှန်တကယ်ခေါင်းဆောင်မှုနှင့် overhang အပေါ်ပုံ ဒီနှစ်မှာ Lok Sabha Jammu နှင့် Kashmir တို့၏အထူးအခြေအနေကိုဖယ်ရှားရန်မိုဒီအစိုးရ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်အလှဆင်ထားသည်။ အကယ်၍ စစ်တမ်းများသည်တိကျကြောင်းသက်သေပြပါက BJP သည်ပြည်နယ်နှစ်ခုလုံးတွင်ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်ဆက်လက်တည်ရှိလိမ့်မည်။
မဲရုံများပိတ်ပြီးသည့်နောက်တနင်္လာနေ့ညနေခင်းတွင်မဲရုံများမှထွက်ခွာသွားသည့်စစ်တမ်းများအရ BJP-Shiv Sena သည် 166 မှ 244 အထိ 145 ထိုင်ခုံကိုဖြတ်ကျော်နိုင်ရန်အတွက် Maharashtra တွင်ဆက်လက်တည်ရှိလိမ့်မည်ဟုခန့်မှန်းရသည်။ မဲရုံများကသူ့ကိုအများစုသုံးပုံတစ်ပုံပေးခဲ့သည်။
ရွေးကောက်ပွဲများမှပြုလုပ်သောစစ်တမ်းများအရ BJP သည်အများစုနီးကပ်နေပြီး Sena သည်လည်းအရေအတွက်တိုးများလာနေသည်ကိုတွေ့ရသည်။ Aditya Thackeray သည်ပါတီ၏အခြေစိုက်စခန်းကိုစိတ်လှုပ်ရှားစွာပြုလုပ်နိုင်သည်။
စိတ်ဝင်စားစရာမှာ၊ စစ်တမ်းကောက်ယူမှုစစ်တမ်းများအရ NCP သည်ကွန်ဂရက်ထက်အမတ်နေရာများများရလိမ့်မည်ဟုဖော်ပြသည်။ ကွန်ဂရက် - ကွန်ယက်မဟာမိတ်အဖွဲ့သည်မဟာရပ်ရှအနောက်ပိုင်းတွင်အခြေချနေပုံရသည် ဒါပေမယ့်ဒီမှာလည်းပါတီများ ရွှေဝါရောင် တိုးတက်စေနိုင်သည်
သြဇာရှိသောနိုင်ငံရေးသမားများ ၀ င်ရောက်လာခြင်း Maratha အဆိုပါ BJP နှင့် Sena အတွက်မဟာမိတ်ခိုင်မာစေခဲ့ကြပေမည်။
အိန္ဒိယ - ဟာရာနာတွင် 65,6% ပါ ၀ င်မှု၊ မဟာရာစထရာတွင် 60,5% ၏ပါဝင်မှုနှုန်း | အိန္ဒိယသတင်း
အိန္ဒိယ - ပါကစ္စတန်ကုမ္ပဏီ Kartarpur တွင်ဒေါ်လာ 20 ဒေါ်လာပေးချေသော်လည်းအိန္ဒိယကမူစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးရန်သဘောတူခဲ့သည် အိန္ဒိယသတင်း